Iindlela ezili-13 zokujongana nokuPhila nabantu basebukhweni - Ubudlelwane
Iindlela ezili-13 zokujongana nokuPhila nabantu basebukhweni
Ukuhlala nabantu basebukhweni bakho akusoze kukhethwe mntu. Kodwa ngamanye amaxesha kuye kufuneke kuzo zonke iintlobo zezizathu, nokuba zezemali, ezisebenzayo, okanye imeko.
Ukuhlala nabazala bakho iintsuku ezimbalwa okanye iiveki yinto enye kwaye kunokubandakanya uxinzelelo lwayo. Kodwa eneneni uyaphila nabo ixesha elandisiweyo, nokuba lixesha elimiselweyo okanye elingenammiselo, yenye into.
2017 iholo lodumo wwe
Nokuba ulunge kangakanani ubudlelwane bakho nabo, ukuhlala nabazali bakho inokuba yinkohliso.
Mhlawumbi ubukhe wanendawo yakho neqabane lakho ngaphambili, okanye mhlawumbi iqabane lakho belihlala nabazali babo kwaye kusengqiqweni ukuba nawe ungene kulo.
Nokuba yeyiphi indlela, ukhangela iindlela zokwenza izinto zilawuleke ngakumbi.
Akukho cebiso lililo. Imeko yakho yahlukile kwaye kubalulekile ukuba uyikhumbule loo nto.
Imiceli mngeni ojamelana nayo xa uhlala nabantu basebukhweni bakho ingahluka ngokupheleleyo kwimiceli mngeni ezinye izibini ezijongana nazo.
Konke kuya kuxhomekeka kubudlelwane onabo kunye nabazala bakho kunye nobudlelwane iqabane lakho elinabo kunye nabo.
Okuninzi kuya kuxhomekeka kubukhulu bendlu yabo. Nokuba uphezu komnye okanye unendawo yokusasazeka. Nokuba nonke nihlala kwigumbi lokuhlambela okanye ninodwa.
Kwaye, ewe, okuninzi kuya kuxhomekeka kwiinkqubo zakho zemihla ngemihla. Nokuba bayasebenza okanye bahlala phantsi, nokuba wena okanye iqabane lakho nisebenza ekhaya. Lingakanani ixesha olichitha endaweni enye, kwaye unokuzimela kangakanani omnye komnye.
Kodwa nokuba injani na imeko yakho, ezi ngcebiso ziya kuba nakho ukukunceda.
Siza kujonga indlela onokuzicombulula ngayo iingxaki kulwalamano lwakho, nendlela onokukrola ngayo ixesha labucala kunye nexesha lodwa, kunye nendlela onokuziva ngayo ekhaya, hayi nje njengondwendwe lwethutyana.
1. Yiba nguwe.
Izinto zokuqala kuqala, akukho sizathu sokuzama ukubeka ngaphambili okanye ukuzenza into ongeyiyo. Awuyi kukwazi ukugcina isenzo ixesha elide, njengoko kuya kuba nzima.
Yiba nembeko kwaye ube nolwazelelelo, uqinisekile, kodwa ungaziva ngathi kufuneka ubenobuntu obufakelwe abomthetho ukuze bakuthande.
Qiniseka ukuba unyanisekile kuwe ukususela kusuku lokuqala ukuze kungafuneki ukuba ume kumsitho.
Kutheni kubalulekile ukuba nethemba
2. Yiba nencoko ethembekileyo neyaphambili.
Endaweni yokuba nethemba lokuba nonke niya kuhlala kunye ngokwendalo kwaye konke kuya kuziqonda, licebo elihle ukuba nihlale phantsi kwasekuqaleni nithethe ngendlela ezakusebenza ngayo kwinqanaba elisebenzayo.
Bazise ukuba uyakuxabisa ngokwenene oko bakwenzela kona kwaye ufuna ukuba nengxoxo yokwenza imeko ibe mpuluswa kangangoko kuye wonke umntu kwaye kuthintele nakuphi na ukungaqondani.
Ngumbono olungileyo ukuvumela iqabane lakho ukuba lithethe kakhulu xa uhlala phantsi kule ngxoxo, kodwa kuya kufuneka uncedise.
Emva kwayo yonke loo nto, iqabane lakho ngokuzenzekelayo liyazi ukuba kuhlala nabazali babo kuya kuba njani kwaye kulindeleke ntoni kubo. Banokucinga ukuba iya kubonakala nakuwe.
Kodwa kubalulekile ukuxoxa ngazo zonke iinkcukacha ukuze wonke umntu acace kumalungiselelo.
Ngaba uyayihlawula irente? Okanye uya kuncedisa ngenye indlela? Imithetho esayilwayo? Ukuthenga ukutya? Ukupheka?
Liliphi ixesha ongaqala ngalo ukwenza ingxolo kusasa, kwaye kufuneka ubethe nini izinto ngokuhlwa? Ngaba ukhona umntu ofuna igumbi lokuhlambela ngexesha elithile? Okanye nayiphi na enye indawo endlwini?
Ngaba kukho apho kungavunyelwanga khona? Umsebenzi wokucoca uza kusebenza njani?
Ukucoca ezi zinto ukusuka ekuhambeni kuya kunceda ukunqanda ezinye zeendawo zentlungu ezingaphephekiyo ezivela kubo bonke abahlala phantsi kophahla olunye.
3. Tsala ubunzima bakho - kwaye uzame ukuqinisekisa ukuba iqabane lakho litsalela elabo.
Nje ukuba wenze ezi zivumelwano, qiniseka ukuba uyabambelela kuzo. Ukuba uthi uza kwenza into, qiniseka ukuba uyayenza.
Kwaye zama ukukhuthaza iqabane lakho ukuba nalo lenze okuncinci. Banokuhendeka ukuba babuyele kwimowudi yokufikisa kwaye bavumele abazali babo babalandele babaqhubele ubomi babo ngenxa yabo, ke yenza konke onako ukukhusela oko.
Okanye ubuncinci ubakhumbuze ukuba xa nobabini nihlala ndedwa, abasayi kuphinda babenomntu obenzela imisebenzi yasekhaya kwakhona.
ilitye elibandayo likaSteve ubuso be-austin
4. Khetha amadabi akho.
Kuza kuhlala kukho izinto ezikukhathaza xa uhlala nabazala bakho, kodwa kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi into efanelekileyo yokwenza ingxwabangxwaba kwaye yintoni engekhoyo.
Rhoqo, kuya kufuneka uthathe umoya ophefumlayo kwaye uvumele nantoni na ukuba ihambe ngenxa yobomi bokuthula.
Yiza kuphela nezinto xa unomdla kubo okanye ucinga ukuba benza imeko engazinzanga.
5. Musa ukuhlala kwiingxabano zentsapho.
Ukuba iqabane lakho lixabana nabazali balo okanye kukho naluphi na olunye uhlobo lwempikiswano yosapho, zama ukuhlala ungathathi cala kunokuba uthathe icala okanye uveze uluvo lwakho malunga nemeko.
Into yokugqibela oyifunayo kukutyholwa ngokuzama ukungena phakathi kwabo, kwaye kukho amashumi eminyaka ezopolitiko zosapho ezichaphazelekayo ekunokwenzeka ukuba uya kusokola ukuziqonda.
6. Bonisa ukulungele.
Yiba luncedo kwaye uzimisele ukuphuma kwindlela yakho ngokufuthi ukuze ubenzele inceba, njengoko izokuphumelela amanqaku amaninzi.
Pheka isidlo sangokuhlwa esikhethekileyo okanye ubathengele into oyithandayo. Bancede ngaphandle kweprojekthi okanye into abanomdla ngayo. Yiya kwimayile eyongezelelweyo naphi na apho unako.
Ezi ntlobo zezinto zinokuthambisa iivili zobudlelwane kwaye ziyincede ziqhubeke ngokutyibilikayo.
Chitha ixesha elisemgangathweni kunye.
Musa ukubakho nje kwindawo enye njengasebukhweni bakho. Ukuhlala kunye kunokuthetha ukuba niyabonana kakhulu kodwa kunqabile ukuba nithethe okanye nihleke kunye.
Qiniseka ukuba uququzelela ixesha elifanelekileyo kunye nabo ngokufuthi ukuze ukonwabele inkampani yomnye nomnye kunye nokudibana ngokufanelekileyo.
Isidlo sangokuhlwa esimnandi okanye usuku olukhethekileyo ngaphandle kufuneka lwenze iqhinga.
8. Yabelana ngezithethe zakho kwaye ufunde ngazo.
Buza malunga nezithethe zabo zosapho kwaye wonwabe malunga nokuthatha inxaxheba. Nokuba ngaba babhiyozela njani imihla yokuzalwa okanye iiholide ezikhethekileyo ezifana neKrisimesi, okanye nantoni na abayiphawulayo kwinkcubeko yabo. Bambelela kwimithendeleko ngegusto.
Kwaye wabelane ngezithethe zakho zosapho kunye nabo. Ukuba uvela kwimvelaphi eyahlukeneyo yenkcubeko, yabelana ngokutya kwakho kwendabuko kunye nemibhiyozo kunye nabo kwaye ubazise ngakumbi.
9. Qiniseka ukuba unexesha elisemgangathweni kunye neqabane lakho.
Okona kubaluleke nangakumbi kunexesha lomgangatho kunye nabasemzini, ewe, lixesha elisemgangathweni kunye neqabane lakho.
Kunganzima ukuchitha ixesha elisemgangathweni kunye xa ungenayo indawo yakho. Ke qiniseka ukuba uhlala unalo ixesha lenu nobabini xa nisekhaya okanye niphume nibe sisibini.
wandiphefumlela emva koko wabuya
Yenza umgudu okhethekileyo wemihla kwaye ubonise iqabane lakho ukuba kubaluleke kangakanani ukugcina i-spark kubudlelwane bakho ilungile kuwe.
10. Phuma uye ujikeleze nabahlobo bakho.
Kwaye qiniseka ukuba ungabakhathaleli abahlobo bakho kunye nosapho. Phuma nabahlobo okanye usapho rhoqo.
Oko kuyakunceda ukuthatha uxinzelelo ekhaya kwaye kukunike indawo yokuphuma ukuba kukho nantoni na ekukhathazayo. Isithuba sokuphefumla sinokuhamba indlela ende ekwenzeni ukuba ubomi basemakhaya bube nzima ngakumbi.
11. Bagcine benolwazi.
Abantu basebukhweni akufuneki balindele ukuba ubazise yonke into oyenzayo okanye ukuba ubekho ekhaya ngexesha elithile. Umdala kwaye akufuneki bazame ukukulawula.
Kodwa kufuneka uhloniphe. Ukuba ufuna ukumema umntu othile, buza ukuba akulungile na. Ukuba ufuna ikhitshi okanye igumbi lokuhlala ngento ethile, banike isilumkiso esiphambili.
Ukuba ngesiqhelo utya kunye ngokuhlwa kwaye uyazi ukuba awuzukuhlala ekhaya, okanye ukuba awunakufika ezivenkileni xa wawusithi uyakuba, bonisa imbeko kwaye ubazise ngokukhawuleza.
12. Musa ukubabandakanya kwidrama yobudlelwane.
Zonke izibini ezitshatayo ziyabethabethana kwaye zinemicimbi yazo, kodwa kubalulekile ukuba ungazibhengezi ezo zinto phambi kwabakhozala. Zigcineni kuni.
Zama ukungashukumi phambi kwabo. Ukuba iqabane lakho lithetha into ekucaphukisayo, thatha umoya, uncume, kwaye uthethe ngayo kamva xa uwedwa.
Ngokuqinisekileyo musa ukukhalaza malunga neqabane lakho kubazali babo okanye uzame ukubafumana kwicala lakho. Yamkela ukuba nantoni na abayithethayo, iqabane lakho ngunyana okanye intombi yabo kwaye ngekhe babe kwicala lakho.
into onokuyenza ngoku ukuphucula umhlaba
13. Thembeka kwiqabane lakho.
Kubaluleke kakhulu ukunxibelelana neqabane lakho malunga nendlela oziva ngayo kuba kunokwenzeka ukuba bangayiqondi ngokwabo.
Bazakufumanisa kulula kakhulu ukuba badibanise ubomi nabazali babo kunokuba uza kuthanda kwaye banokuzabalaza ukubona izinto ngokwembono yakho.
Ke, mabaxelele ukuba amava akho ahlukile kwawabo.
Ukuba uyabathanda abazali babo kwaye uyabathanda, kwaye ufuna ngokwenene ukwenza lo msebenzi, kodwa uzakufuna inkxaso yabo kule meko.
Ngaba ukuhlala nabazali bakho kubangela ubunzima obukhulu kubudlelwane? Thetha kwi-Intanethi kwingcali yobudlelwane kwi-Relationship Hero enokukunceda ufumane izinto. Ngokulula.
Ukuba uMyeni wakho ukhetha usapho lwaKhe ngaphezulu kwakho, Nantsi into ekufuneka uyenzile
9 Akukho Bullsh * t Iingcebiso zokukunceda Ngamaxesha Anzima Kubudlelwane bakho
Izinto endifuna ukuzazi ngobomi
Amagama okuchaza umfazi ogqibeleleyo
Ilogan paul yathathwa yajijwa
ndibubuyisa njani ubomi bam
Ungaswela njani ngokweemvakalelo
ngokwahlukana nesithandwa sakho sexesha elide